KIIMIKO "RUN": SHARAXAAD FAAHFAAHSAN EE KALA DUWAN, BEERITAANKA, DARYEELKA IYO SAWIRRADA - BEERTA
Tartanka jiilaalka-adag ee "Vernaya" waa ilaahyo loogu talagalay bartamaha Russia
Dheeh ayaa ku fadhiya 2% oo kaliya dhammaan geedo midho leh oo ku yaal beeraha jasiiradda dhexe ee Ruushka. Waxaa sababa dareenka hoose ee jiilaalka iyo baahida weyn ee kuleylka dhirta tufaaxa.
Dad badani waxay u arkaan pear sida badeecada culus ee caloosha iyo diidaan inay ku beeri on sirqo gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, midho this lahaansho hantiyo faa'iido leh oo fiiro u yeelo.
Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto darajo sax ah. Tusaale ahaan, noocyada kala duwan ee Vernaya waxay ku dhacdaa xaaladaha cimilada ee gobolka Moscow iyo weyn oo ku yaala bartamaha Russia.
Waxay cadeeysaa noocyada dayrta isteroberi iyo waxay noqon doontaa mid weyn inaad dareentid xaafadaha. Marka la eego isticmaalka - Nofeembar-Disembar. Ka codso si aad ah ugu keydiyay qaboojiyaha. Ku haboon in la isticmaalo oo la isticmaalo oo aan fiicneyn oo loo adeegsado.
Iyada oo xilliga dayrta cayayaanka sidoo kale ay ka mid yihiin: Bere Bosk, Thumbelina, Forest Beauty, Fairy Tale iyo Svarog.
Tani waa abuurida laba shaqaale oo ka tirsan Machadka Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dhaq-dhaqaaqa iyo Dhaqaalaha ee Yu.A. Petrov iyo N.V. Eimim. Waxay dhacday 1958-kii, 1998-kii imtixaanka gobolka ee noocyada kala duwan ee la bilaabay, iyo noocyada kala duwan waxaa lagu daray diiwaanka gobolka 2001-dii. Waxay isticmaaleen pear leh magaca quruxda leh Josephine Mechelnskaya iyo isugeyntii dhexdhexaad ah No. 3 (ma ahan mid aan jaceyl ah!) Sida qalabka isha.
Qeexida noocyo pears True
Geedka waxaa iska leh dhexda. Taajirku wuxuu leeyahay celcelis ahaan qaro weyn oo aan caadi ahayn.
Lafaatiirta leh curvature waxay ku dhowaadaan xagal 90˚ ah oo leh nidaam isku dhafan.
Jilacsanaan jilicsan on laanta ugu muhiimsan iyo brown tan. Inta lagu jiro xilliga xagaaga, dhererka celceliska caleemaha casaan-caleemaha curdunka ah ayaa la gaarey.
Qaar badan oo ah qaabab dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah - checheviches ayaa lagu sameeyay iyaga oo ku jira qeybta cork. Dhar dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah ayaa leh qaab isku dhafan.
Caleemaha leh midabka cagaaran mugdi waa ukunta-qaabeeya oo si siman u taabto taabashada iyada oo aan lahayn timo, laakiin leh xeelad adag (badbaadin). Ku dhajisey jarista khafiif ah ee cabbirka dhexdhexaad ah iyada oo aan hoos u dhicin. Ubax cad oo leh xayawaan ku wareegsan, inkastoo yar oo cabbirkeedu yar yahay, waa kuwo udgoon.
Miraha waxaa lagu sameeyaa kolchatka (nooca qoryaha miraha ah), labadaba fudud iyo kakan, lakabyo (khudaar gaaban oo gaaban), on waran ah (laamaha miro ilaa 15 cm) iyo bacaha miro (qaybo badan oo caleemo ah). Qaababka midhaha, sida ay tahay inuu yahay, waa pear-qaabeeya oo leh meel yar yar. Miisaanka pear wuxuu gaarayaa 150g. Maqaarka midhihiisa waa qalalan, siman oo iftiin leh.
On ilmaha uurjiif ah waxaa jira dhibco yar oo midab leh oo midab leh. Midabka miro waa cagaar, iyo marka si buuxda u bislaaday midabka huruud ah ayaa lagu daray. Peduncigu wuxuu ku xiran yahay noocyada qaro weyn iyo midab. Hawl yar oo aad u yar ayaa ku dhawaad ​​maqnaanshaha, isagoo yeesha qaab muuqaal ah. Haysashada yar yar, ballaaran oo dabacsan, baalkani wuxuu leeyahay nus koob furan.
Chambers for abuurka xiro size dhexdhexaad ah. Qalabka isku midka ah ee wadajirka ah ee elliptical. Muujiyeyaasha dhererka iyo dhererka tuubada hoostiisa sidoo kale qaab dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah. Geediga qashinka ee dhexdhexaadku wuxuu leeyahay midab madow ah.
Qaswada caanaha-macaan ee cufka dhexdhexaadka ah ee cufnaanta ayaa iska leh midhaha leh dhar qurux badan. Pear casiir leh oo macaan, inkastoo ay jiraan fikrado ku saabsan caraf udgoon ee noocyo kala duwan.
Muuqaalka waxaa lagu qiyaasay 4.2 dhibcood, dhadhankiisuna waa 4.5. Laakiin qaar ayaa qadarinaya dhadhanka kaliya 3.
Waxyaabaha kiimikada ee sonkorta - 10.1%, asids - 0.15%.
Noocyada kala duwan ee pear waxay leeyihiin dhadhan weyn: Kupava, Krasulya, Lada, Dekabrinka iyo Rossoshanskaya macaan.
Sawirka hoose ee aad ka heli kartaa badan oo la yaqaan pear kala duwan "Vernaya":
Dhibaatada jiilaalka (horjoogsanaya barafka ilaa -2˚), skoroplodny, samoplodny iyo sare-sare.
Waxaa jira warar sheegaya in hal geed ah ay suurtagal tahay in la qaado ilaa 40 kiilo garaam oo isteroberi ah. Saameynta celceliska waa ilaa 30 tan oo halkii hektar ah beerta.
Gobolka Moscow ayaa daaqa qaybta labaad ee Sebtember iyo badhkii hore ee Oktoobar. Xoojinta uur-jiifka ayaa ah mid aad u xooggan bisha Sebtembar.
Fasaxyada ka dib beerashada bilaabaan inay midho u dhasho sannadka saddexaad ama afaraad.
Iyo haddii fikrado loo qaybiyo marka la eego dhadhanka, ka dibna, sida dhaliyaha qalfoofka, wuxuu ahaa mid aad u qadarin leh si isku mid ah.
Waxaa si weyn loo isticmaalaa samaynta isugeyn, jamsi, jams, marmalades, miro la shiiday iyo xataa khamri.
Noocyada dhaxanta u adkaysta waxaa ka mid ah: Bere Russkaya, Lel, Muscovite, Perun iyo Svarog.
Ma soo gudbinayso shuruudo gaar ah oo ku saabsan ciidda, laakiin waxay dareemeysaa fiicnaanshaha biyaha iyo kuwa bacrimiya. Kalluunka qoyaanka ah ee pear this tolerates liidan.
Saplings waxay u baahan tahay feejignaan caadi ah:
loosening of dhulka ee wareegga wheel ah;
dib u soo kabashada taajka.
Goobta loo yaqaan "landing" waxay u baahan tahay in la doorto oo aan laheyn. Qulqulka xididka ah lama aasi. Inkasta oo tani ay tahay noocyo isku-dhafan, waxay fiicnaan lahayd in la kordhiyo wax-soosaarka, sidaa darteed waxaa jira geedo badan oo jeex ah goobta.
In ceelka for beerto geedo waa in la dhigo bacriminta si ay u kala doortaan:
80 g oo amooniyam ah;
1 kg of superphosphate;
800 g oo qoryo qoryo ah;
150 g of potassium acid sulfuric.
Mustaqbalka, bacarinsho ayaa la samayn karaa sanadkiiba, laakiin ha u baahnayn bacriminta nitrogen dayrta. Si loo hagaajiyo hardeysiga jiilaalka, mulching agagaarka jir ee leh humus waxaa lagula talinayaa.
Waraabinta waxaa lagu talinayaa 4-5 goor bishii. Hal baaldi biyo ah ayaa ku filan geed weyn oo ah subaxdii iyo inta badan fiidkii. Si kastaba ha noqotee, waraabinta waxay u baahan tahay in la hagaajiyo, diirada saarta cimilada. Waqtiga laga beerto dhoobo ubax iyo inta lagu jiro muddada fruiting, waraabinta waa in la siiyo fiiro gaar ah.
Geedaha geedaha yar yar ee jiilaalka waxaa lagu duuduubi karaa qalabka wax lagu ilaaliyo (tuubooyinka laydhka ah ee nacasku ku haboon yahay).
Waxay gooyeen pear ka badan geed geedka tufaaxa. Munaasabadan waa in la qabtaa sanad walba guga ka hor inta aan ku hari burooyinkeeda. Geedo yar yar oo geedo ah ayaa ku goosta saddexaad.
Kala duwan ayaa loo tixgeliyaa qolof u adkaysata. Geedaha geedaha yar yar waxay u baahan yihiin in laga ilaaliyo jiirka.
Tallaabooyinka loogu talagalay ilaalinta geedaha khudaarta waa in la sameeyaa laga bilaabo horraanta gu'ga ilaa dayrta goor dambe:
Marka ugu horeysa ee la adeegsado codsiga bacriminta dabiiciga ahTusaale ahaan, digada. Sidoo kale la dagaalama cudurrada leh isticmaalka tincture dabcan.
Tusaale ahaan, si loo daweeyo warshad leh cudur. xayrta maqaarkaTincture Applied daloosha hay.
Tallaabooyinka beeraha ayaa kor u qaada koritaanka dhirta. Tani waa goobta saxda ah ee beerto, goynta saxda ah ee saxda ah ee lakabyada aan loo baahnayn iyo kuwa bukaanka ah, diyaarinta wax beerto xilligaas.
Cayayaanka iyo kantaroolka cudurku waxay ku saleysanyihiin dhirta geedaha leh kiimikooyinka ku habboon. Waxqabadyada kiimikada ah waxaa loo samayn karaa labadaba ujeedada ka hortagga iyo hagaajinta geedka.
Cadaadiska noocyada kala duwan ee cudurada waa Hera, Dekabrinka, Carmen, Larinska iyo Rogneda.
Sida waafaqsan farsamooyinka farsamada-farsameedka waxaa loola jeedaa habka wax lagu beerto beerta iyo ciidda iyadoo la adeegsanayo kuleylka. Gubashada lakabka cudurada iyo mummified mummified.
Noocyada ugu fiican ee isteroberi, sida tufaax, ma jiraan. Mid kastaa wuxuu leeyahay faa'iido u gaar ah.
Jiilaalka fasalka dayrta Xaqiiqda dhabta ah ku dhawaad ​​faa'iidooyinka: skoroplodnost, hardiness jiilaalka iyo suurtogalnimada in la cuno bisha Diseembar iyo xitaa kadib markii lagu kaydiyo habboon.
Kuwani waa arrimo wanaagsan oo saameynaya kala xulashada noocyada kala duwan ee beeritaanka goobta, sababtoo ah ma jiraan noocyo badan oo leh tayadaas.